အသားကောင်းပြီး ဒီဇိုင်းမိုက်လို့ကြိုက်တယ်။ တော်တော်ဝတ်လို့ကောင်းတယ်ဗျ။ Read more Hide
?????????????? ??????? ?????? ???????? ? - ????????????